नायिका निशा अधिकारीले अर्कै सँग बिहे गरेपछि पूर्वप्रेमीले गाडी फिर्ता मागे - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
नायिका निशा अधिकारीले अर्कै सँग बिहे गरेपछि पूर्वप्रेमीले गाडी फिर्ता मागे
प्रकाशित मिति: २१ असार २०७४, बुधबार
असार २१, काठमाण्डौं । खुशीको कुरा हो कि नायिका निशा अधिकारी र क्रिकेटर शरद भेषवाकर बितको लामो प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य जिवनमा परिणत भयो । तर दुःखको कुरा छ कि अर्कोसँग विवाह गरिसकेपछि गाडी फिर्ता गरिदिएहुन्थ्यो भन्दै एकजना धनाढ्य अहिले आफ्नो सर्कलमा साथीभाइ सँग रोइलो गर्दै छन् ।
मुख्यतः घरजग्गा कारोबारी,बैंक सञ्चालक हुँदै सांसदसम्म भएका ति धनाढ्यले नायिका निशा अधिकारी लाई कुनै बेला अपार्टमेन्ट दिएका थिए । तर निशाको मन अन्तै मोडिदा अपार्टमेन्ट छाडिन, गाडी भने साथमै छ । ०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा सदस्य मनोनित भएपछी निशालाई ति व्यापारीले समय दिन छाडे । त्यसपछि गोपीकृण्ण हलका सञ्चालक उद्दव पौडेलका छोरो निरकसँग नजिकिइन । तर निरक सँगपनि लामो मित्रता रहेन जतिबेला सहाना बज्राचार्य र दावा स्टेभेन शेर्पा लिभिङ्ग टुगेदरमा थिए । उनिहरुको सम्बन्ध टुटनुअघि निशा मिल्ने साथी भइन् ।
स्रोतका अनुसार अहिले दावा र सहानाबीच सम्बन्ध राम्रो छैन । दावालाई पैसाको कुनै दुःख छैन । दावा हिजोआज नम्रता श्रेष्ठ सँग नजिक छन् । उनी नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाका छोरा । आङछिरिङका दुई श्रीमती । एउटा नेपाली र अर्को बेल्जियमकी । बेल्जियमकी आमाको नामबाट स्टेभेन जुराइएको हो । उनै निशाले गो गाडी फिर्ता नगरेपछि दावाले साथी सर्कलमा गुनासो गर्दै हिँडेको ।
नेपाल आईडल यूटियुवमा विश्वमै हेरिनेमा दोस्रो स्थानमा
काठमाडौं । अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कबाट सञ्चालित एपीवान एचडी टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल […]
धेरै नेपाली चलचित्रमा द्वन्द्व निर्देशन राजेन्द्र खड्गीमाथि प्रहरी अनुसन्धान
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले चर्चित द्वन्द्वनिर्देशक राजेन्द्र […]
भदौ २, काठमाडौं । नेपाली टेलिभिजनको इतिहासमा सर्वाधिक रुचाइएको गायन रियालिटी सो नेपाल आइडलको यात्रा अहिले […]
खाली पेट पुलमुनि सुत्थे जस्टिन बिबर
एजेन्सी – युवा गायक जस्टिन बिबर अहिले विश्वका सेलिब्रेटीबीच नाम र दामका एक ज्वलन्त उदाहरण हुन् । तर, […]
कुन-कुन हुन् सात्विक,राजसिक र तामसिक भोजन,रंग, क्षेत्र ? कसले गर्छ कुन गुणको विकास ?
२७ दशमलव ३४ प्रतिशत मानिसले मास्क लगाउनै जान्दैनन :अनुसन्धान परिषद्
नेपालमा कोरोनाबाट थप दुईको मृत्यु, मृतकको संख्या ७५ पुग्यो